Ihe ị ga-ahụ na Liverpool | Akụkọ Njem
Mariela Carril | | Liverpool, Ihe ị ga-ahụ
Liverpool Ọ bụ otu n'ime obodo ama ama ama ama ama na England ma nwekarịrị ihe karịrị narị afọ asatọ ịdị adị. Ị maara? Ọzọkwa, o nwere ọtụtụ ebe UNESCO kwupụtara Ihe Nketa Worldwa na n'etiti data ya na-achọsi ike ịmata eziokwu, eziokwu ahụ bụ na ọ nwere obodo China kacha ochie na Europe.
Mana gịnị kpatara Liverpool ji bụrụ obodo ama ama? Nke ọma, nke mbụ n'ihi ọdịnala ọdịnala ya, n'ụzọ doro anya, Ọ bụ ebe obibi nke Beatles, ma ọ nwere ọtụtụ ihe ọzọ ma ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ njem na England ma nwee ụbọchị ole na ole ịhapụ London wee gaa Liverpool. Lee, anyị hapụrụ gị ihe ị ga-ahụ.
2 Ihe ị ga-ahụ na Liverpool
El ime obodo tọrọ ntọala na narị afọ nke XNUMX na ọtụtụ narị afọ ndị bi na ya erughị otu puku mmadụ, mana na narị afọ nke iri na asaa ihe malitere ịgbanwe aka na aka na Ahia ahia dabere na ahia ohu na ụtaba.
Ka ọ na-erule na narị afọ nke iri na itoolu, obodo ahụ na ọdụ ụgbọ mmiri ya adịworị mkpa na azụmaahịa ụwa. Dịka ọmụmaatụ, ebe a bụ owu sitere na South America nke nyere ndị ọrụ nchịkwa nke Industrial Revolution batara, yabụ n'ime obere oge ọ dị mkpa ọbụna karịa London. Akụ na ụba ya dọtara ndị kwabatara na nke mere ka ọ bụrụ otu n'ime obodo mbụ dị iche iche nke ọtụtụ obodo.
Mgbe Agha Mbụ gasịrị, na nloghachi nke ndị agha, ọchịchọ maka ọrụ mụbara ma na njedebe nke a wetara esemokwu agbụrụ dị mkpa, na-agbaso ihe na-eme n'akụkụ ụwa ndị ọzọ na nke gosipụtara mmalite nke usoro nnabata. ga-enye mgbe Agha wouldwa nke Abụọ gasịrị.
Ma kedu ka obodo si? Ọ dị kilomita 283 site na London, na Liverpool Bay na Osimiri Irish na nanị 70 mita n'elu oke osimiri. Nwee a ọnọdụ ihu igwe nke oke mmiri, na oge ezumike dị jụụ na oge oyi dị jụụ na etiti obodo ya nwere eriri akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ. Taa ihe dị ka ọkara nde mmadụ bi na ya, nke kachasị ọcha, ọ bụ ezie na dị ka anyị kwuru n'elu enwere ọnụ ọgụgụ dị mkpa na ndị isi ojii.
Na ọtụtụ afọ nke akụkọ ntolite na mkpa ọ dị na azụmahịa mba ofesi enwere ọtụtụ ebe na-atọ ụtọ ileta. Imirikiti ụlọ ndị ahụ sitere na etiti narị afọ nke XNUMX. E nwere ọtụtụ Georgian ịke ụlọ, karịa Bath na nke ahụ na-ekwu ọtụtụ, na n'ezie Mpaghara ọdụ ụgbọ mmiri na ụlọ nkwakọba ihe ya nwere ìhè nke ha.
Liverpool nwere ọdụ ụgbọ mmiri hydraulic mbụ nke ụwa na ọdụ ụgbọ mmiri nke mbụ mechiri emechi, mana akwụkwọ ozi ochie nke ọdụ ụgbọ mmiri obodo ahụ laghachiri na 1846 ma bụrụ mkpokọta nke ụlọ ndị a maara Albert n'ọdụ ụgbọ mmiri. Buildingslọ ndị a bụ akụkọ ihe mere eme wee rụọ ọrụ dị oke mkpa na mmepe obodo.
Ha malitere site na etiti narị afọ nke XNUMX na E ji brik na nkume mee ha ma nwekwa ígwè. Enweghị osisi na ọ bụ ya mere ha ji bụrụ otu ụdị n'oge ahụ. Ha enweghị ike ịmị ọkụ!
.Nnɛ agbanweela ọzọ ma bụrụ ụlọ ahịa, ụlọ nri na ụlọ mmanya, na ebe ngosi ihe mgbe ochie, na nlọghachị a ha mere nwere ike ịhụ n'ọdụ ụgbọ mmiri ndị ọzọ gburugburu ụwa. Nke a bụ International Sla Sla Museum, Tate Liverpool, Merseyside Maritime Museum na Beatles Akụkọ a ma ama.
Ebe Slagba Ohu Mba Nile: Ọ bụ akụkụ nke Merseyside Maritime Museum ma nwee veranda atọ na-elekwasị anya na ndụ ndị North Africa, ịchụ nta ha, azụmahịa ha na nnwere onwe ha na-esote. Ọ na-emepe site na elekere iri nke ụtụtụ ruo elekere ise nke mgbede ma nweere onwe ya ịbanye.
Ogwurugwu imeju: Thislọ ihe ngosi nka a na ihe ngosi nka bụ akụkụ nke Tate Britain na Tate London ma lekọta nchịkọta ya Ihe osise Britain site na 1500 ruo taa. Ọ na-arụ ọrụ n'ime ụlọ nkwakọba ihe ochie na Albert Dock, na mbadamba obodo, wee mepee na 1899.
The Beatles Akụkọ: bụ ụlọ ihe ngosi nka banyere ìgwè a wee mepee na 1990. Enwere ntụrụndụ nke ebe ngosi maka ndị otu ahụ dị ka The Cavern Club Abbey Road Studios.
Ọzọ na-ewu ewu ebe na-aga site na aha nke Atọ atọ, Royal Liver Building, Port nke Liverpool Building na Cunard Building. Ha atọ nọ na Pier Head, ha dị iche iche n'ụdị ụkpụrụ ụlọ ma bụrụ akara nke akụnụba obodo nke obodo.
Buildingslọ niile a, gbakwunyere ndị ọzọ, na-enye obodo ahụ onwe ya na n'ime iri afọ ndị na-adịbeghị anya, ha agbanweela na mmezigharị nke mere ka Liverpool dịghachi ọhụrụ. Ma gịnị dị n'èzí ọdụ ụgbọ mmiri?
Enwere ụlọ akụkọ ihe mere eme, ọmụmaatụ. Speke Hall bụ ọmarịcha ụlọ Tudor nke malitere na ngwụsị narị afọ nke XNUMX, enwekwara Croxteth Hall, Woolton Hall, na Bluecoat Chambers wuru na ụdị nke Queen Anne. Ọzọkwa, obodo ahụ nwere katidral abụọ mara mma, ndị Katidral Katọlik wuru na 60s nke iri abuo nke narị afọ, ọ dịghị ihe ọdịnala ya imewe, na Katidral Anglican, ndị kasị ibu na mba, Gothic in style.
Eziokwu bu na isi Enwere ụzọ abụọ iji nwee ekele maka obodo ahụ, otu na-aga ya na nke ọzọ na-agba ụgbọ mmiri. Mersey Ferries na-agba ọsọ kwa afọ, na-esi na Pier Head pụọ kwa awa ma na-efu £ 16 maka ndị okenye abụọ. Njegharị a dịruru nkeji 70 ma ị nwere ike ịzụta tiketi jikọtara iji ụgbọ ala ndị njem. Enwere ụgbọ ala ọzọ na-elekwasị anya na Beatles, the Magical Mystery Tour, na egwu na ozi, na .18 95 tiketi. E nwekwara njegharị na-aga, lesgbọ okporo ụzọ.
N'ikpeazụ, na-ekwu okwu banyere Beatles, ọ gaghị ekwe omume ịhapụ Liverpool na-enweghị gburugburu akụkọ ihe mere eme nke ìgwè ahụ. Ya mere, ị nwere ike ịga na Cavern Club mbụ, na Mathew Street, na-emeghe mgbe niile site na 11 nke ụtụtụ ma na-egosi ihe ngosi ọ bụla kwa abalị, ma ọ bụ njem njem tagzi Bekee na 50 pound tagzi.
Kacha ọhụrụ Beatle mma bụ Ebe A Na-ahụkarị Beatles Museum, mepere site na Mọnde ruo Sọnde site na elekere iri nke ụtụtụ ruo elekere asaa nke ụtụtụ, na 10 pound n'ọnụ ụzọ, yana nchịkọta nke ihe karịrị 7 kesara na okpukpu atọ.
Muselọ ihe ngosi nka a dị na Mathew Street, dị ka Cavern Club, ma na-enye njem zuru oke site n'akụkọ ihe mere eme nke ndị Bekee a ga-agbanwe egwu nke ụwa. Ala ubi Strawberry Ọ bụ ụlọ nzọpụta dị na Woolton, mpaghara dị na Liverpool, yana egwu Beatles nke ghọrọ ihe ewu ewu na 1967, nke Lennon, onye bi nso. Lọ ya ka na-akwụ ya ka ọ bụrụ ebe amaara ndị Fans.
Ọzọ Beatle saịtị iji nwaa bụ Casbah mmanya, ebe ọ malitere maka ìgwè ahụ. Nwere ike ịga site na ndoputa ma nleta ahụ na-efu pound 15 kwa okenye. Dịka ị pụrụ ịhụ, Liverpool bụ nchịkọta nke akụkọ egwu, nka na ọdịbendị. Echefula ya!
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Obodo » Liverpool » Ihe ị ga-ahụ na Liverpool
Ọdọ Plitvice na Croatia